ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : တရုပ်ကိုကြောက်နေရတယ်လို. သမတရုံးဝန်ကြီးကပြောဆို
အချက် (၂) ချက်ရှိပါတယ်တဲ့။
ပထမအချက်က ၈၈ တုန်းက တိုင်းပြည်ပျက်စဉ် စားစရာတောင်မရှိလို.
တရုပ်ပြည် မူဆယ်လမ်းကနေ တင်သွင်းပြီး၊ အသက်ဆက်ခဲ့ရတဲ့
ဒုတိယအချက်က နယ်စပ်က ဗ.က.ပ တွေကို တရုပ်အစိုးရကထောက်ပံ
ထားလို. ဗ.က.ပ တွေက လမ်းကြောင်း (၃) ကြောင်းနဲ.ထိုးစစ်ဆင်
လာတာကို ပြန်တိုက်နေရလို. အဲဒီအချိန်က တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်
ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့၊ နောက် တိန်.ရှောင်ဖိန်အစိုးရတက်လာမှ
ဗ.က.ပ တွေကို ထောက်ပံတာတွေဖြတ်လိုက်မှ အေးသွားခဲ့တာတဲ့။
တရုပ်ကနယ်စပ်တွေမှာ အရင် ဗ.က.ပ တုန်းကလို ဟိုထောက်ပံ၊
ဒီဟာထောက်ပံ လုပ်လာခဲ့ရင် ရှေ.ကိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတွေ
မလုပ်နိုင်ပဲ၊ နောက်ပြန်လှည့်နေရမယ်တဲ့။တရုပ်နဲ. ရန်မဖြစ်ရဲဘူးတဲ့။
အခုတောင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ. စပ်လျဉ်းပြီင်္း တရုပ်ကိုတော်တော်
စာရေးသူ kotun အချိန် 11/24/2012